Xisbiga Uhuru oo Xildhibaan Adan Barre Ducaale ugu baaqey inuu iscasilo “Waa Maxay Sababtu” – idalenews.com
Murankii ka dhex taagnaa xildhibaanada xisbiga talada haya ee Jubilee ayaa sii xoogaystay kadib markii maanta 7 xildhibaan ay ku baaqeen in Xildhibaan Aadan Bare Ducaale uu iscasilo kadib markii uu si aan leex leexad lahyn ugu eedeeyay dowlada inay si gooni ubartilmaameydsanayso Soomaalida.
Xildhibaanadan oo 6 kamid ah ay isku xisbi yihiin halka midka kale uu ka tirsan yahay xisbiga ODM ayaa xildhibaan Ducaale ku eedeeyay in laftirkiisu taageersan yahay argagixisada maadaamo uu cambaareeyay howlgalada ka dhanka ah argagixisada.
Xildhibaanadan ayaa ku baaqay in Ducaale iscasilo hadii uu iscasili waayaana ay xoog ku casili doonaan.
Mid kamid ah xildhibaanada ayaa sheegay in Ducaale fariin handadaad ah moobilka ugu soo diray uuna ugudbiyay Booliska.
Mid kamid ah xildhibaanada ayaa ku dooday in Ducaale uu aad ujeclaa Sheekhii Mombasa lagu dilay Sheekh Abubakar sidaa darteedna uu wiilkiisa ugu magac daray Abubakar.
Xildhibaan Ducaale ayaa dhankiisa sheegay inuusan iscasili doonin codkii uu ku difaacay Uhuru Kenyatta uu ku difaaci doono muslimiinta Kenya iyo dadkiisa wuxuuna xusay in cidna uusan marti u ahayn, xisbiguna uu yahay mid la wada leeyahay.
Wuxuu xildhibaanku sheegay in eeda uga imaanaysa xildhibaanada qaar ay kor un usii qaadayso taageerada dadkiisa iyo Muslimiinta.
Dooda hada taagan ayaa timid kadib markii xildhibaano 20 dhan oo Muslimiin ah oo uu horkacayay xildhibaan Ducaale ay shir ku qabteen fagaara kuyaala Islii iyagoo cadeeyay in howlgalada ka socda xaafada Islii ay yihiin kuwo lagu bartilmaameydsanayo Soomaalida.
Daawo: Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo si kulul uga hadlay howlgalada ciidamada Kenya ee Xaafada Islii